Ekupedzisira Nzeve Inowedzera Spotify Kubatanidzwa kweMagetsi Bhatani | Gadget nhau
Ekupedzisira Nzeve dzinowedzera Spotify kusangana kweMagic Bhatani
Jordi Gimenez | | Vatauri
Aya ndiwo maratidziro atakaita mumusoro weiyi nhau, iyo yekupedzisira Nzeve yakasimba ichangobva kuwedzera iyo Spotify kusangana yemidziyo ine iyo Bhatani Bhatani inowanikwa, iri mune ino kesi ndeye Ekupedzisira Nzeve BOOM 3 uye MEGABOOM 3.
Asi izvi hazvaigona sei kuuya kubva pakutanga kana kuvhurwa kweiyo UE nyowani? Zvakanaka, chikonzero hachina kujeka asi chatakaziva ndechekuti Mashiripiti Bhatani rinoshanda neApple Music uye Deezer PremiumKubva payakatangwa uye zvaishamisa kuti haina kushanda neSpotify, ikozvino iri kushanda zvizere. Uye zvakare, iyo kambani pachayo inotaura kuti ivo vari kutoronga kuwedzera mamwe masevhisi emimhanzi mune isiri kure kure ramangwana.
Yekupedzisira Nzeve BOOM 3, iyo-yevhu-mutauri mutauri uye ese mhando
Nhau mune iyi kesi ndezve nhasi Vashandisi veApple vanogona kuwana Spotify playlists, podcast, uye zvimwe nekungobata bhatani iri iro rinowedzerwa mushanduro dzichangoburwa dzevatauri veUE. Iyo yakazara simba uye mhando yeaya maspika hapana mubvunzo kuti ndeimwe yemasimba asi kusvika kweBHOOM 3 uye MEGABOOM 3 vhezheni kwakawedzera iyo Bhatani reMagic iro ikozvino rinokutendera iwe kuti uwane zvishoma zvishoma kubva mukurukuri.
Kubva Android vhezheni 5.0 zvichienda mberi
Mune ino kesi, chimwe chezvinodikanwa kuti tikwanise kushandisa basa iri pane yedu Android chishandiso hachisi chimwe kunze kwekunge chichigadziriswa kune vhezheni ye Android 5.0 kana yepamusoro, saka zvinofungidzirwa kuti angangoita ese madhizaini anokwanisa kunakirwa neiyi nyowani mamirire. Tinogona kutanga nekudzora Spotify zviri nyore Kunyangwe tiri kuteerera nziyo mugomo kana kupembera padenga remba, Ultimate Ears zvinoita kuti zvive nyore kupfuura nakare kose kuwana nziyo dzatinofarira uye kudzora kurova kwako .aya ndiwo mamwe emashoko e Ekupedzisira Nzeve CEO Charlotte Johs panguva yekuita iyi nhau kuruzhinji:
Iyo BOOM 3 uye MEGABOOM 3 vatauri vakachinja nzira yatinoteerera kumimhanzi neyakareruka uye nyore kusangana kweMagineti Bhatani. Isu tiri kugara tichiwedzera maficha matsva kuchikamu chedu chekutanga mutauri, uye iyo BOOM 3 uye MEGABOOM 3 inoramba ichiwedzera zvirinani nekuwedzera Spotify rutsigiro pane zvishandiso zveApple.
Sezvatakatsanangura mwedzi mishoma yapfuura mukudzokorora kwatakaita kwechigadzirwa muActualidad Gadget, iyo itsva BOOM 3 uye MEGABOOM 3 yakawedzera bhatani rakanzi Magic Bhatani raibvumidza mushandisi kutamba, kumbomira uye kusvetuka matraki akananga kubva kunevatauri, vasina kutsvaga foni yako muhomwe yako kana mune imwe kamuri. Iye zvino vashandisi vemidziyo ine Android inoshanda sisitimu uye account yekushambadzira mimhanzi sevhisi, Spotify, zvakare vane mukana wekuwana mimhanzi yavo nekungori kwenguva refu pinda bhatani uye nekudaro tanga yavo yavanofarira playlists, maalbum, nziyo uye podcast, uye vanogona kunyange svetuka nemitambo yekutamba nekudzvanya zvakare.
Chinhu chega chinodiwa kuti ukwanise kushandisa sevhisi iyi kuwedzera pakuve neshanduro yeApple 5 kana yakakwira pane yako nharembozha uye zviripachena kuve neakaunzi muSpotify inomhanyisa mimhanzi sevhisi ndeyekuzviita kubva mahara BOOM uye MEGABOOM mobile application kubva kuUkupedzisira Nzeve. Iyi Anwendung inogona kutorwa pasi kubva kuGoogle Play chitoro uye kubva kuApp Store pasina muripo uye nekudaro wotanga kunakidzwa nesarudzo dzese dzainopa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Mufananidzo uye kurira » Vatauri » Ekupedzisira Nzeve dzinowedzera Spotify kusangana kweMagic Bhatani
Maitiro ekudzoreredza rakadzimwa Izwi faira
Yedu kurudziro kurudziro yeiyi Nhema Chishanu 2019